Didier Drogba ayaa dhaliyay guul weyn oo dalxiis oo ka soo gaadhay Côte d'Ivoire
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Didier Drogba ayaa dhaliyay guul weyn oo dalxiis oo ka soo gaadhay Côte d'Ivoire
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Cote d'Ivoire • dhaqanka • Investments • Shirka Warka Warshadaha • News • Dadka • Sports • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Xiddiga caalamiga ah ee kubada cagta Didier Drogba ayaa ka caawiyay meeshii uu ku dhashay, Côte d'Ivoire, ku dhufo dahab adigoo gacan ka geysanaya uruurinta MOU-ga wadar ahaan $ 15 bilyan oo ballanqaadyo ah in la taageero mashaariicda dalxiiska ee galbeedka Afrika.
Horumarka ayaa imanaya ka hor Shirka saamaynta weyn leh ee 'Hotel de l'Investissement Hotelier Africain' (FIHA), oo ka dhici doona Abidjan bisha soo socota (Maarso 23 - 25). FIHA waxaa lagu yaqaanaa awoodeeda isku xirka maal-gashadayaasha cusub iyo horumariyeyaasha, la-taliyayaasha, qandaraasleyda, milkiilayaasha hoteelada iyo hoggaamiyeyaasha siyaasadeed.
Kii hore Chelsea Weeraryahan - oo hadda ah danjiraha dalxiiska adduunka ee Qaramada Midoobay - wuxuu qayb ka ahaa guul caalami ah oo la gaadhay si kor loogu qaado guusha soo koraysa iyo soo jiidashada dhaqaalaha dalxiiska ee Côte d'Ivoire. Waddanku wuxuu ku faanaa heerka kobaca dhaqaalaha ee qiyaastii 8% ee 2019 iyo, u socosho ahaan, wuxuu ku jiraa kaalinta seddexaad ee Saxaraha Saxaraha Afrika, oo leh 2 milyan oo booqdayaal caalami ah, oo ka dambeeya Koonfur Afrika iyo Zimbabwe, kana horreeya Uganda, Botswana, Kenya ama Mauritius (sida ku xusan xogta UNWTO 2018).
Calanka, Sublime Côte d'Ivoire, Didier Drogba wuxuu fure u ahaa koox ka mid ah hogaamiyaasha ganacsiga iyo siyaasada ee dalka Ivory Coast, iyo waliba shaqsiyaad soo bandhiga, kuwaas oo safar ku soo maray Dubai iyo Hamburg. Waxay la soo noqdeen wax ka badan 15 bilyan oo doolar oo ah ballanqaadyo maaliyadeed oo loogu talagalay mashaariic kala duwan oo xagga dalxiiska ah, laga soo bilaabo hudheelada, ilaa dalxiisyada iyo horumarinta xeebta. Dhamaan taageerayaasha waxaa lagu casuumay inay kaqeyb galaan FIHA.
Philippe Doizelet, oo ah Maamulaha Iskaashatada shirkadda Horwath HTL, ayaa hagayey dadaalka Côte d'Ivoire. Wuxuu yiri: “Waa bog maran oo warshadaha ay ku qori karaan sida ugu xiisaha badan. Waxyaabo badan ayaa la dhisayaa - hudheelo ay weheliyaan xarumaha dhaqanka iyo xarumaha shirarka, iyo waxyaabo kale. Xeebta cajiibka ah waxay bixisaa fursado 'madadaalo' (isku-dhaf ganacsi iyo xilli firaaqo). Abidjan dhaafsiisan; Jasiiradda Boulay, Bassam iyo Jacqueville ayaa hadda ah meelaha ugu rajada badan. ” Wuxuu arkaa awooda ugu weyn ee 'isku dhafka isticmaalka' mashaariicda, isku darka waqtiga firaaqada, xafiisyada iyo tafaariiqda iyo martigelinta, qaasatan, huteellada caanka ah ee 2-xiddig & 3 xidig leh iyo guryo joogitaan dheereed leh
Hogaaminta himilada dalka ee ah in dalxiisku noqdo mid ka mid ah tiirarka ugu waaweyn ee dhaqaalaha, waa Wasiirka Dalxiiska Siandou Fofana. Waxaa ku tilmaamay Philippe Doizelet inuu yahay "aragti dheer oo si qoto dheer u daacad ah. Wuxuu si adag uga shaqeeyaa isku soo dhaweynta dadka wuxuuna soo jiitaa khubarada ugu fiican. ”